Ụlọ nke WNC Ụlọ Nkọwa Ihe Mere Eme na Ụlọ Ọchịchị Kasị Mma | Achọpụtara nke ọma
Ụlọ nke WNC Ụlọ Nkọwa Ihe Emere n'Ụlọ Obodo Kasị Mma
Home » Ndepụta » Ụlọ nke WNC Ụlọ Nkọwa Ihe Emere n'Ụlọ Obodo Kasị Mma
Sq Na: 6292
A gbanwee na College Town - ụlọ WNC Ụlọ Nkọwa Akụkọ
Site na ime ime ya, enwere mgbe ọ dị ukwuu na atụmatụ ya. E mere na 1894 site n'aka ezinụlọ Buchanan a ma ama nke ndị Jackson County maara nke ọma, ụlọ WNC a ma ama na-ebi n'ime ụlọ ya, 2.6-acre na-echekwa ebe mara mma, ma, ọ bụ naanị obere njem na ụlọ ahịa ndị mara mma ma na-ekpuchi ya ụlọ oriri na ọṅụṅụ na kọleji kọleji Sylva.
Kemgbe 1894 ọ na-ele mgbanwe obodo ahụ. O tinyewo ya. Ebe dị na Sylva ma bụrụ ndị a ma ama, mgbidi ya kwadoro nnọkọ ntụrụndụ, na-enwe nzukọ obodo, ma nụ mkpebi ndị nwere mmetụta.
Ka obodo ahụ malitere - ụlọ ọrụ ohuru, ndị agbata obi ọhụrụ, ọ sikwa na ya pụta. O nwere ọganihu nke ọma na-ahapụ nanị nyochacha kachasị mma na ịgbaso nduzi akụkọ ihe mere eme na ụkpụrụ ụlọ. Ọ ka bụ nwanyị na-eguzosi ike na obodo a. Ọ bụ ibu ugbu a, na ihe fọrọ nke nta 6,300 square ụkwụ.
Oge adịghị njọ dị ka mgbe ọ bụ nwata. Ugbu a, ọ na-anụ ka ọchị dị ka ụmụ ụmụ na-agba mmiri na ọdọ mmiri na-acha anụnụ anụnụ mgbe ndị nwe ya na-arahụ n'ákwà ya ndị e kpuchiri ekpuchi ka ha na-ehi ụra site na ísì ísì nke ubi ya.
N'ime ya ọ bụ kpamkpam ma jiri nlezianya megharịa ya na ihe ọ bụla dị mma ị nwere ike iche. Nanị ịkpọ aha ole na ole: ụlọ ala ndị na-edozi ihe, ndị na-ebu ihe ọkụkụ, ndị na-ere nri ahịa nke 10-burner, ebe ndị na-anụ ọla kọpa, na nke mbụ ụlọ elu, ụlọ iri nri na 16th Century Maria Theresa chandelier, ụlọ mposi na stoel na Jotel, omenala ndị a na-emepụta na-emepụta ọnụ ụzọ, ọnụ ụzọ French, ebe ọkụ ọkụ Russia, mgbidi na-egbuke egbuke, mgbidi dị elu nke Kohler, gụnyere akwa batrị mara mma na travertine inlay, , mmiri ozuzo na 8 jets na nnukwu Kohler nke na-ekpuchi elu na-ekpuchi elu, nke na-achịkwa mbara igwe na-achịkwa nke ọma, brich-floored solarium, okpokoro mmanya, ụlọ oriri na-ekpo ọkụ, na ọnụ ụzọ French na-emeghe n'ọdọ mmiri, na na na.
Uzo a na-ekpuchi anya na-ele anya n'elu osisi boxwoods, ọtụtụ osisi okooko osisi, dwarf magnolia na osisi cherry.
HỤLA AKWỤKWỌ ỤLỌ AKWỤKWỌ WNC a na 3D
Akara na $ 1.5 nde. Naanị 20 nkeji na Waynesville na 45 nkeji gaa Asheville, NC.
Gụọ ihe m dere banyere otu esi ere ihe onwunwe pụrụ iche.
Ahịa: $ 865,000
Okwu: Ụdị Nwanne 174.
Koodu mpaghara: 28779
Afọ Wuru: 1894
Ụkwụ Square: 6292
Ime ụlọ: 6
Ọdọ mmiri: Na-Ground-20 x 40, 8 'Miri
Nke gara agaEbube Ezubere, Ezubere nke Ukwuu, Na-eche Maka NkwụsịIhe na-esoteỤlọ dị na 5.3 Acres & Pond
Ụlọ dị na 5.3 Acres & Pond